Isku day Kenya looga saari lahaa kiiska maxkamadda ICJ ee badda oo fashilmay | Xaysimo
Home War Isku day Kenya looga saari lahaa kiiska maxkamadda ICJ ee badda oo...
Isku day Kenya looga saari lahaa kiiska maxkamadda ICJ ee badda oo fashilmay
Maxkamad ku taal dalka Kenya ayaa diiday codsi ahaa in Kenya ka baxdo ka qeybgalka kiiska maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda (ICJ), ee ku saabsan muranka dhinaca badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Garsoorayaasha maxkamada Sare ee Kenya, Kanyi Kimondo, Robert Limo and Anthony Mrima ayaa xusay Jimcihii in arrimiha ay dalbanayaan codsadayaasha lagu raadin doono si hufan, oo qaab diblomaasiyadeed ah, halkii ay maxkamad go’aan ka gaari laheyd.
Qareenada kiiskan wada ayaa sidoo kale doonayey in maxkamadda sare ay dowladda Kenya ka joojiso inay u hoggaansato go’aan kasta oo kasoo baxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda.
Maxkamadda ayaa go’aamisay in Kenya ay qeyb ka sii ahaato dacwada taala maxkamadda ICJ taas oo aan waxba iska badalin.
Kenya ayaa ku dooday, si kastaba ha noqotee, in kiiska aan laga dhageysan maxkamadda ICJ, oo ay sheegtay inay tahay mid adag oo laga yaabo inaysan xallin karin arrimaha siyaasadeed ee ku xiran kiiska.
Taas bedelkeed, waxay u martay Midowga Afrika iyo meelo kale, iyagoo raadinaya wada xaajood ka baxsan maxkamad.